देशैभरी विवेकशीलको लहर आयोः रविन्द्र मिश्र – Online Khabar
२०७४ कार्तिक २७ गते १७:५३
जनताले यसपाली(चुनाबमा), पुरानालाई बिश्राम गर्न निर्देसन दिनेछन, प्राकृतिक न्यायले पनि त्यसै भन्छ, नसक्नेले(अयोग्य)ओगटेर बस्ने होइन, गर्ने(योग्य)लाई ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ, ठाउँ खाली नगर्नेलाई, जनताले आफ्नो मतबाट, बहिस्कार गर्ने अवसर त छदैछ l
३. ‘गुमनाम भएँ, तर बदनाम भइनँ !’
४. काम गर्न नसके जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्छन् : प्रचण्ड
५. ‘हामी गरीबको कोही रहेनछ’
६. इमरान खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकोमा पछुतो छैन : रेहम
७. नुरप्रसाद अधिकारी पक्राउ, ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थालियो
८. ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा ‘फिरङ्गी’ आमिर
१०. नेपाली क्रिकेटको ‘अपरेसन’: जता हेर्‍यो त्यतै भ्वाङ
१२. एसिया कपको फाइनलमा बंगलादेश र पाकिस्तानमध्ये कुन ?
असोजको पानीले डुब्यो कैलाली, अधिकांश क्षेत्र जलमग्न
काठमाडौंमा साजन राई एकल साँझ हुने
किन गरिन्छ श्राद्ध ? किन गरिँदैन शुभकर्म ?
देशैभरी विवेकशीलको लहर आयोः रविन्द्र मिश्र
२०७४ कार्तिक २७ गते १४:१८ मा प्रकाशित
२७ कात्तिक, काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको पक्षमा देशैभरी लहर आएको बताएका छन् । देशभरीका जनताले सद्भाव दर्शाइरहेकाले यस चुनावबाट पार्टीको पक्षमा नतिजा आउने निश्चित रहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘केही समय अगाडि नै हाम्रो संगठन देशभर निर्माण गर्न सकेको भए यसैपाली देशको नेतृत्व लिन सक्ने रहेछौं,’ मिश्रले दावी गरे ।
विवेकशील साझा पार्टीको काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ को चुनावी अभियानका क्रममा सोमबार बिहान स्युचाटारमा भएको कार्यक्रममा मिश्र उपस्थित भएका थिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार मिलन पाण्डेले आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै आफु काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ मार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्न उत्रेको कुरा राखे ।
उनले आˆना प्रतिस्पर्धीलाई लक्षित गर्दै आफुले जितेमा संसदमा नघुर्ने अनि आम नागरिकका मुद्दा उठाउदै संसदमा गर्जने र दिन रात काम गर्ने बताए ।
‘राजनीतिमा एउटै च्यानल २८ वर्षदेखि चलेकाले अब च्यानल परिवर्तन गर्ने बेला भयो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा विवेकशील साझाको नयाँ चुनावी गीतमा पार्टीका संयोजक मिश्र क्षेत्र नं ९ का उम्मेदवार पाण्डेलगायतले नाचगान गरेका थिए ।